I-insulin yesifo sikashukela: uma kunqunyelwe, ukubalwa kwamthamo, ukuthi ungahlaba kanjani? > Insulin
Ungayifaka kanjani i-insulin kushukela
I-insulin ye-hormone ekhiqizwa yi-pancreas iyadingeka ukugcina i-glucose homeostasis, ilawule i-carbohydrate kanye ne-protein metabolism, kanye ne-metabolism yamandla. Lapho le hormone inganele, kuba ne-hyperglycemia engapheli, okuvame kakhulu ukukhombisa isifo sikashukela, bese kunqunywa i-insulin yesifo sikashukela.
Kungani bajova i-insulin yesifo sikashukela? Umsebenzi owelashwa i-insulini yesifo sikashukela ukuhlinzeka ngomzimba ngaleli hormone, ngoba amaseli e-pancreatic β-cell kuhlobo lwe-1 sikashukela awafezekisi umsebenzi wawo wobumfihlo futhi awenzi i-insulin. I-Endocrinologists ibiza imijovo ejwayelekile ye-insulin kulolu hlobo lwe -abetes insulin replacement therapy okuhloswe ngayo ukulwa ne-hyperglycemia - ukugcwala okuthe xaxa kweglucose egazini.
Futhi izinkomba eziphambili zokusetshenziswa kwamalungiselelo we-insulin yi-mellitus yesifo sikashukela esincike ku-insulin. Ngingenqaba i-insulin kushukela? Cha, kuyadingeka ukujova i-insulin ngohlobo 1 sikashukela, ngoba lapho kungekho-hormone endo native okuwukuphela kwendlela yokulawula ukugcwala kweglucose yegazi futhi ugweme imiphumela emibi yokwanda kwayo. Kulesi simo, umphumela we-insulin we-pharmacological, okuwukuthi, amalungiselelo we-insulin, uveza kabusha umphumela womzimba we-insulin okhiqizwa yi-pancreas. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi umlutha we-insulin kushukela awukhuli.
I-insulin ibekelwa nini isifo sikashukela esihlobene nale hormone? I-insulin yesifo sikashukela sohlobo 2 - nesidingo esandayo se-insulin ngenxa yokumelana nezicubu ezithile ezitholwa yi-hormone egijimayo egazini futhi imithambo ye-carbohydrate metabolism - isetshenziswa lapho amaseli e-pancreatic β-cell engakwazi ukufeza lesi sidingo. Ngaphezu kwalokho, ukungasebenzi kahle okuqhubekayo kwe-cell-cell ezigulini eziningi ezinamafutha kuholela ekuthini ube ne-hyperglycemia isikhathi eside, yize uthatha umuthi ukwehlisa ushukela wegazi. Futhi ukushintshela ku-insulin ngohlobo 2 sikashukela kungabuyisela ukulawulwa kwe-glycemic futhi kunciphise ingozi yezinkinga ezihambisana nesifo sikashukela esiqhubekayo (kufaka phakathi isifo sikashukela).
Ucwaningo olushicilelwe ephephabhukwini i-Lancet Diabetes & Endocrinology ngonyaka we-2013 lakhombisa ukusebenza ngempumelelo kwe-insulin yesikhashana yesikhashana ku-59-65% yeziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2.
Futhi, imijovo ye-insulin yalolu hlobo lwesifo sikashukela ingabekwa isikhathi esinqunyelwe ngenxa yokungenelela kokuhlinzwa, i-pathologies enzima yokutheleleka noma isimo esibuhlungu nesiphuthumayo (ngokuyinhloko sokushaywa unhlangothi nokuhlaselwa yisifo senhliziyo).
I-insulin isetshenziswa kukashukela wabesifazane abakhulelwe (okubizwa ngokuthi yi-gestationalabetes mellitus) - uma ungamisa umzimba ngokwezifo umzimba futhi unqande i-hyperglycemia ngokudla. Kepha ngesikhathi sokukhulelwa, akuwona wonke amalungiselelo e-insulin angasetshenziswa (kepha yi-insulin yomuntu kuphela): i-endocrinologist kumele ikhethe ikhambi elifanele - icubungula ukwephulwa kwezidakamizwa namazinga kashukela egazini esigulini esithile.
Insulin ngaphambi noma ngemuva kokudla
Ishedyuli yemijovo ye-insulin ithintwa umthamo odingekayo womuthi, uhlobo lwayo nokudla. Isikhathi esiqondile kufanele sinqunywe ngudokotela. Ngaphezu kwalokho, ukhetha ishedyuli efanelekile yomjovo, ukudla, uhlobo lomjovo.
Umthamo wokuphatha umuthi ngqo uhambisana nenani lama-kilojoule adliwayo ngesikhathi sokudla, ngakho-ke, ngesifo sikashukela, i-akhawunti ephelele yenani lama-kilojoule kanye noshukela weglue kugcinwa.
Isifo sikashukela sohlobo lokuqala sikashukela kufanele sifake i-insulin kabili nsuku zonke ekuseni nakusihlwa. Ochwepheshe batusa umjovo ngaphambi kokudla, ukuze isiguli sizinzise ushukela.
Abantu abanesifo sikashukela sohlobo lwesibili lwesifo bangcono ekugcineni izinga elifanele likashukela, ngaphandle kokuphathwa okuphoqelekile kwe-insulin. Kwezinye izimo, i-insulin ifakwa ngaphambi kokudla kwakusihlwa noma ibhulakufesi, ngoba engxenyeni yokuqala yosuku i-insulin ayinamandla futhi umuthi olawulwa uzowusiza ulondoloze ibhalansi efanele.
Ungafaka i-insulin ezindaweni ezahlukene endaweni yomzimba. Kubalulekile ukuthi indawo lapho lo muthi uzosetshenziselwa khona ungabi nemithambo yegazi enkulu, ngoba lapho i-insulin ihlangana negazi, isenzo senzeka ngokushesha, okungekuhle kakhulu kumuntu owenza le nqubo nsuku zonke.
Odokotela neziguli banemibono yabo eqoqiwe echaza izindawo ezithile zomzimba lapho kudingeka khona umjovo:
Isisu yindawo yomzimba, ezungeze inkaba, ezingeni lebhande, kufakwa insulin emfishane.
Ngasohlangothini lwethanga (indawo enqabile yomjovo).
I-insulin ende ifakwa engalweni ukuze inikeze umphumela omude.
Ukuze uthole umjovo, indawo yesikhumba lapho kuzofakwa khona umjovo akudingeki ukuthi ihlikihlwe ngotshwala, kodwa vele uyigeze ngamanzi afudumele anensipho. Indlela yokujova ifaka ukudonsa isikhumba endaweni efanele, ukufaka inaliti engela kwama-degree angama-45. Isitoko kufanele sicindezelwe kahle ngangokunokwenzeka, ngemuva kwalokho udinga ukulinda imizuzwana engu-5-7 bese uthola inaliti.
Kubalulekile ukucabanga ibanga phakathi kwamaphoyinti lapho kwenziwa khona umjovo wokugcina. Ibanga elincane okufanele lenzeke phakathi kwabo ngamasentimitha angama-2-3.
Ukusebenza kwe-insulin futhi kuncike ekushiseni lapho umjovo wenziwa khona, esimweni esibandayo, isenzo se-insulin sizoncipha.
Indlela yokuhambisa i-insulin esiswini ibandakanya ukubeka inalithi ebangeni elingama-2,5 cm kusuka kunoma yiziphi izibazi, izimvukuzane kanye no-5 cm ukusuka enkabeni. Awukwazi ukufaka umuthi endaweni lapho bekukhona amanxeba okulimala, noma kukhona isikhumba esibuthakathaka.
Iyini ingozi yesifo sikashukela kanye nezinkinga zaso?
I-algorithm efanelekile yokuphathwa kwe-insulin esiswini:
Isikhumba siqoqwa ngeminwe yakho, ngenkathi sibambezeleka (ngoba umuthi udinga ukujojwa kumafutha angaphansi).
Inaliti kufanele ibekwe engxenyeni engama-90 noma angama-45 degrees (kuya ngendawo yokujova nobukhulu besikhumba).
Umuthi ufakwa ngokunyakaza okusheshayo, emva kwalokho okwemizuzwana emihlanu kubanjwe inaliti ngaphansi kwesikhumba kukhishwe kuso.
Ngemuva komjovo, isirinji ibekwa esitsheni esikhethekile esivikela ezintweni ezibukhali.
Imvamisa, lapho umuthi usufakwa emaphethelweni aphansi, i-insulin iba nesikhathi esifushane, kepha kunalokho esheshayo, ngoba umjovo ungaphakathi. Ngaphezu kwalokho, umjovo onjalo ungadala ukuzwa okwengeziwe kobuhlungu nokopha kunokufaka imijovo kwezicubu ezingaphansi.
Ochwepheshe abayincomi imijovo enjalo kule ngxenye yomzimba, ngoba lokhu kungadala imiphumela emibi eminingana, kukwandisa isimo sesiguli.
Ukufakwa emahlombe kwesinye isikhathi kuba ngenye yezinto ezilula kakhulu lapho isiguli senza lokhu kukodwa. I-algorithm yezenzo ifana necebo lokujova esiswini, ngakho-ke into esemqoka ukubheka kahle umthamo futhi uthole indawo engatholakali eduze kwemithambo yegazi emikhulu. Kuyadingeka ukwethula umuthi emsipha odabukisayo wehlombe.
Ungayifaka kanjani insulin enganeni
Ingane idinga umthamo ophansi, ngakho-ke abazali kudingeka bajwayele ukuthi bafaka kanjani umuthi. Izingane okuthi kuzo lapho uhlobo lokuqala lukashukela luhlale lufuna umjovo we-insulin, ngoba umzimba awuzikhiqizeli wona wedwa.
Kwethulwa i-insulin kusiza ekugcineni inani elijwayelekile loshukela.
Ngohlobo lwesibili sikashukela, ingane kungenzeka ingenazo izinkinga ezinkulu nge-glucose, ngakho-ke, ukuligcina inani layo elijwayelekile egazini kuzoba yimithi ekhethekile. Ukusetshenziswa kwe-insulin kungadingeka kuphela kwezinye izimo, ngenkathi kuhlanganiswa nezinye izidakamizwa.
Izingane azikwazi ukufaka i-insulin ngokwazo, ngakho-ke, abazali kudingeka banakekele ukunikeza ingane umjovo. Izingane ezineminyaka engaphezu kweyishumi ubudala zingafunda ukunikela ngomjovo zodwa. Ukuze wenze lokhu, abazali kudingeka bachaze ngokunembile ukulandelana kwezenzo:
Geza izandla, zome.
Qoqa isirinji, ama-ampoule, uvolo wekotoni notshwala.
Bheka ilebula le-insulin.
Lungisa umuthi uqobo (uwususe noma uxube izinhlobo ezimbili ezihlukene), kuya ngokuya kwencwadi kadokotela oya kuyo.
Njengabantu abadala, i-insulin efakwe esiswini isebenza kahle kakhulu. Uma indawo ishintsha nsuku zonke, kuyadingeka ukunquma isikhathi esiqondile lapho umuthi uyolethwa njalo emzimbeni.
Kungcono ukujova i-insulin
Kuyadingeka ukujova i-insulin nge-syringe ekhethekile esetshenziselwe ukusetshenziswa okukodwa. Kunezinhlobo ezimbili zama-syringe: i-insulin ejwayelekile nepeni.
Izinkampani eziningi zikhiqiza ama-insulin. Ngokwokwejwayelekile, benziwa ngopulasitiki obonakalayo, onezingxenye ezi-4: umzimba we-cylindrical (lapho kukhonjiswa khona ukumaka), isiqu, inaliti ne-cap kuyathutha. Amanye amamodeli anenaliti ekhiphekayo, amanye axhunywe emzimbeni.
Isirinji esijwayelekile se-insulin senzelwe imililitha eyodwa ye-insulin ene-40 U / ml. Uma umuntu edinga ukuphatha amayunithi angaphezu kwangama-40 womuthi, khona-ke kungcono ukuthatha isirinji equkethe amayunithi angama-80. Ngokungabikho kobuhlungu, kuyisiko ukusebenzisa isirinji kanye kuphela, kepha uma kunesidingo, isirinji eyodwa singasetshenziswa izikhathi ezingama-2-3. Isikhathi ngasinye, inalithi izovunguza, ngakho-ke yize ibukhali, kungcono ukuyifaka esiswini, kuthi ngemuva kokuqhumuka engalweni noma emlenzeni.
Kungokokuqala ngqa ngo-1983, ukuthengiswa kwepeni elikhethekile elifana nepeni lokuloba elijwayelekile. Izinsimbi zalo mkhiqizo zinokuhle nokubi. Okuhlanganisiwe kungenzeka ukujova noma kukuphi, ngoba asikho isidingo sokudambisa, futhi ngaphandle kwalokho, inaliti yesirinji enjalo inciphile kakhulu kunaleyo ejwayelekile.
Ipeni lesirinji liyathengiswa ekhethekile, ngepeni yomthombo. Ukusetshenziswa kwesirinji enjalo akunconywa kubantu abadinga umthamo omncane we-insulin, ngoba ayinasikole esingaphansi kweyunithi elilodwa, ngokungafani nesirinji ejwayelekile.
Kungani ushukela wegazi ugxuma
Imvamisa, amantombazane anezinkinga noshukela omningi, abuza ukuthi: ngingawujova yini insulin ngesikhathi sokukhulelwa? Odokotela kuleli cala abahlali banikeze imijovo ye-insulin ephoqelekile, ngoba ezimweni eziningi ukukhulelwa kwenzeka emantombazaneni anohlobo lwesibili lwesifo lapho ushukela ungalawulwa ngezinye izindlela (ukudla okune-carbohydrate emincane).
Uma sikhona isidingo se-insulin eyengeziwe, khona-ke odokotela banquma umuthi wokuthuthukisa ama-pancreas. Kulokhu, kubhalwa i-insulin emfushane. Ama-nuances maqondana nale nqubo ngesikhathi sokukhulelwa alandelayo:
Ukufakwa kwe-insulin kuyadingeka lapho ama-pancreas eyithuthukise ngemodi yemvelo. Ngaphambi kokudla, kufakwa i-insulin emfushane, phakathi kokutholwa kokudla okuhlukahlukene - okude.
Ngaphambi kokulala, umama okhulelwe udinga ukukala ushukela. Isikhombi esijwayelekile sifinyelela ku-6.0 mmol / l.
Ngosuku lokuzalwa, ukuqapha njalo inani le-glucose kuyadingeka, ngoba ngenxa yengcindezi kunganda futhi kwehle esikhathini esifushane esifanele.
Kuyadingeka futhi ukuqapha izinga le-glucose ngesikhathi sokuncelisa ibele.
Omama badinga ukuvocavoca umzimba njalo ngemodi elinganiselayo.
Ngemuva kokubeletha, intombazane inqunywa i-insulin ngokuchayeka isikhathi eside ukuze iqhubeke noshukela.
Kwenzekani uma i-insulin ihanjiswa umuntu onempilo?
Umuthi uyadingeka kulabo bantu abanezinkinga ngokukhiqizwa kwe-insulin yemvelo, ngakho-ke impendulo yombuzo othi "uma ukufaka injulin insulin kumuntu ophilile" imi kanje:
Ukujova umuthi owodwa emzimbeni womuntu onempilo kungadala imiphumela emibi eminingi, ngoba i-insulin ngokwayo ingumuthi oqinile.
Kwezinye izimo, kuzodingeka ukuthi uhlambe isisu, amathumbu.
Umzimba, ngokomqondo, ubona i-insulin efakiwe njengobuthi, okuholela ekudakweni komzimba.
Ushukela womuntu ophile kahle uqala ukwehla kakhulu futhi kwehle ngokwemibandela, engafaka imiphumela ehambisana nezinkinga.
Ngomjovo owenziwa njalo wesidakamizwa, umuntu ophilile angaba nezinkinga nge-yegilo yegilo, futhi umana eyeka ukukhiqiza le nto ngokuzimela.
Kungenzeka yini ukuthi ujove insulin ephelelwe yisikhathi?
Kuyenqatshelwe ngokuphelele ukunikeza imijovo ngomuthi ophelelwe yisikhathi, ngoba imishanguzo esephelelwe yisikhathi ingangena ekushintsheni kwamakhemikhali emzimbeni, ngenxa yalokho imikhiqizo ebolile iqala ukuthinta uhlelo lwe-hormonal, ishintshe izakhiwo zayo futhi ibangele nemiphumela emibi.
Awusoze wanquma ngokunembile ukuthi yini okuyokwenzeka emzimbeni, ngenxa yalokho, ubungozi obunjalo kufanele bungafakwa ngaphandle futhi umkhiqizo ofanele ofanele kufanele ungene.
Kwenzekani uma abanesifo sikashukela bengafaki i-insulin?
Uma umuntu onesifo sikashukela sohlobo lwesibili lwesifo eyeka ukujova, ushukela wegazi uzokwenyuka, ngenxa yalokho isiguli sizothola ubunzima noma ukuqina kwe-hyperglycemic. Ezigulini ezinesifo sohlobo 1, ukungabikho komjovo we-insulin kugcwele i-ketoacidosis. Esimweni esibi kakhulu, ushukela omningi ungaholela ekunqunyweni kwemikhawulo noma ubumpumputhe.
I-insulin ingeniswa kanjani emzimbeni
Kudingeka imijovo yansuku zonke yokuphila kwabantu abanesifo sikashukela sohlobo 1. Ngohlobo lwesibili lwesifo, i-insulin nayo iyadingeka. Imijovo ye-insulin esefike ngesikhathi ingakusindisa ekufeni ngenxa yesifo sikashukela. I-insulin nayo ikhonjiswa kwisifo sikashukela sokukhulelwa ukuze sigweme ukungahambi kahle kwengane ngesikhathi sokukhulelwa.
Manje indlela ethandwa kakhulu yokujova i-insulin ipeni lesirinji. Le yunithi ingathathwa yonke indawo nawe, ibekwe ephaketheni noma esikhwameni. Ipeni lesirinji linokubukeka okumnandi, kanti nezinaliti zokulahlwa ziyafakwa.
Manje amasirinji cishe akhethe ukungafakwa. Izinduna zokuphatha ngesandla zivame ukusetshenziswa kakhulu, ngoba kulula kakhulu ukuphathisa i-insulin engalweni nakwezinye izingxenye zomzimba.
Imijovo ye-insulin inganikezwa:
I-insulin ebambela amafushane ilawulwa ngenkathi kwakhiwa ikhehla lesifo sikashukela. Ungasheshe ubone ukuthi ungayifaka kanjani injulin, kepha kunezimfihlo ezimbalwa. Lapho wenza inqubo yokuphatha i-insulin, ukulandelana kwezenzo ezithile kufanele kubhekwe.
Udinga ukwenza imijovo ngokuya ngemithetho ethile:
Ngaphambi kokunikeza umjovo, udinga ukugeza izandla zakho kahle ngensipho esezingeni,
qiniseka ukuthi indawo lapho ufaka i-insulin ihlanzekile,
indawo ayigcotshwanga ngotshwala ngoba ibhubhisa i-insulin,
vula isirinji kaningi ukuvikela ukuxutshwa komuthi,
kuthathwa umthamo, umuthi udwetshwe kwisirinji, ohlolwe kwangaphambili ukuze usebenze,
ngaso sonke isikhathi lapho udinga ukuthatha inalithi entsha,
ukunikeza umjovo, udinga ukugoqa isikhumba ufake umuthi lapho,
inaliti isesikhunjeni semizuzwana eyi-10, into ijova kancane,
i-crease iqondile, futhi awudingi ukusula indawo yomjovo.
Kubalulekile ukwazi ukuthi ungayifaka kuphi insulin. Ubuntu bokwethulwa buthinteka nesisindo somuntu. Kunezindlela ezahlukahlukene zokuphatha le hormone. Ukunquma ukuthi ulifaka kuphi i-insulin, kufanele unake isisindo somuntu.
Uma ngesifo sikashukela umuntu ukhuluphele noma ejwayelekile, lapho-ke bajova i-insulin ngokuthe nkqo. Endabeni yabantu abanciphile, isirinji kufanele ibekwe engxenyeni yama-degrees angama-45-60 ebusweni bekhanda lesikhumba.
Ukulawulwa ngesikhathi somjovo we-insulin kuyisihluthulelo sempilo nasindisa impilo kashukela.
Kwenziwa kuphi imijovo ye-insulin?
Ungafaka imijovo ye-insulin ezindaweni eziningana zomzimba. Ukwenza lula ukuqonda phakathi kwesiguli nodokotela, lezi zindawo zinamagama athile. Isibonelo, igama elejwayelekile "isisu" yisifunda esiseduze-nesibalo ezingeni lebhande.
I-Bioavailability iphesenti lento esegazini. Ukusebenza kwe-insulin kuncike ngqo ekutheni i-insulin iphathwe kuphi.
Kungcono ukujova i-insulin esiswini. Amaphuzu amahle kakhulu womjovo yizindawo amasentimitha ambalwa kwesobunxele nangakwesokudla kwenkaba. Imijovo kulezi zindawo ibuhlungu impela, ngakho-ke jola ngemuva kokuthuthukiswa kwamakhono.
Ukuze wehlise izinhlungu, i-insulin ingangena entangeni, eduze nangasohlangothini. Kulezi zindawo zokujova udinga ukukhohlisa njalo. Awukwazi ukwenza umjovo wesibili lapho, kufanele ubuyise amasentimitha ambalwa.
Endaweni yamahlombe ehlombe, i-insulin ayithakwa futhi nakwezinye izindawo. Izindawo ze-insulin kufanele zishintshwe. Isibonelo, "umlenze" "yisisu" noma "isandla" "yisisu". Uma ukwelashwa kwenziwa ngama-insulin amade futhi afushane, khona-ke lawo mafushane abekwa esiswini, bese wona amade abekwa engalweni noma emlenzeni. Ngale ndlela umuthi uzosebenza ngokushesha okukhulu.
Ngokwazisa kwemijovo ye-insulin usebenzisa ipeni-isirinji, noma iyiphi indawo yomzimba iyatholakala. Ngokusebenzisa isirinji le-insulin ejwayelekile, imijovo emlenzeni noma esiswini ingenziwa kalula.
Umuntu otholakala ukuthi unesifo sikashukela kufanele afundise umndeni wakhe kanye nabathandekayo bakhe indlela yokufaka imijovo ye-insulin.
Ilawulwa kanjani i-insulin?
Manje i-insulini ivame ukuphathwa nge-syringes yepeni noma isirinji ejwayelekile yokulahla. Inketho yamuva isetshenziswa kakhulu ngabantu abaneminyaka yobudala, isizukulwane esincanyana sikhetha ukusebenzisa ipeni yesirinji, ngoba le divayisi ilula kakhulu, ingathwalwa nawe.
Ngaphambi kokwenza umjovo, udinga ukubheka ukuthi ipeni lesirinji liyasebenza yini. Idivayisi ingahle yephule, okuzoholela kumthamo ongalungile noma ukuphathwa okungaphumeleli komuthi.
Phakathi kwezintambo zepulasitiki, udinga ukukhetha izinketho ngenalithi eyakhelwe ngaphakathi. Njengomthetho, i-insulin ayihlali kumadivayisi anjalo ngemuva komjovo, okusho ukuthi umthamo uzofinyelela esigulini ngokuphelele. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi mangaki amayunithi e-insulin afaka ukwahlukaniswa kwesilinganiso esisodwa.
Wonke amasirinji we-insulin angabulala. Imvamisa, umthamo wabo ngu-1 ml, lokhu kufana ne-100 IU - amayunithi ezokwelapha. Isirinji inezigaba ezingama-20, ngasinye sazo sihambelana amayunithi amabili e-insulin. Ku-syringe pen, ukwahlukaniswa kwesikali yi-1 IU.
Abantu bavame ukwesaba ukuqala imijovo ye-insulin, ikakhulukazi esiswini. Kodwa uma wenza kahle inqubo, lapho-ke ungenza ngempumelelo imijovo, lapho i-insulin ifakwe khona intramuscularly.
Isifo sikashukela sohlobo lwe-2 isifo sikashukela asifuni ukushintshela emjozweni we-insulin ukuze singatholi imijovo nsuku zonke. Kepha noma umuntu enalolu hlobo lwe-pathology ngqo, kusadingeka afunde indlela yokulawulwa kwe-insulin.
Ukwazi ukuthi imijovo enikezwe i-insulin inikezwa kuphi, nokuthi imiphi imvamisa lokhu kufanele yenzeke, umuntu uzokwazi ukuqinisekisa izinga elifanele likashukela egazini. Ngakho-ke, ukuvikela izinkinga kuzonikezwa.
Ungakhohlwa ukuthi noma iyiphi indawo lapho kusetshenzelwa khona i-insulin ingashintsha izici zayo. Uma ufudumeza isikhumba, isibonelo, ugeze, khona-ke endaweni yomjovo, izinqubo ezisebenzayo zezinto eziphilayo zizoqala.
Amanxeba akufanele avele endaweni yomjovo, ikakhulukazi esiswini. Kule ndawo, into ithakwa ngokushesha okukhulu.
Esimweni sezinkatho, ukumunca umuthi kuzoshesha uma wenza izivivinyo zomzimba noma ugibela ibhayisekili.
Umuzwa wokujova kwe-insulin
Lapho wenza imijovo ye-insulin ezindaweni ezithile, kuvela imizwa ehlukene. Ngomjovo engalweni, Ubuhlungu cishe abuzwakali, obuhlungu kakhulu yisisu. Uma inaliti ibukhali futhi imiphetho yezinzwa ingathintwa, khona-ke ubuhlungu buvame ukungabikho lapho kungenwa kunoma iyiphi indawo nangamazinga ahlukile okuphatha.
Ukuqinisekisa isenzo esifanelekile se-insulin, kufanele kungeniswe engxenyeni yamafutha angaphansi. Kulokhu, izinhlungu zihlala zimnene, futhi ukulimala kudlula ngokushesha. Akudingekile ukufaka imijovo kulezi zindawo ngaphambi kokuba i-hematoma inyamalale. Uma kudonswa ithonsi legazi ngesikhathi somjovo, lokhu kusho ukuthi inaliti ingene emgodini wegazi.
Lapho wenza ukwelashwa kwe-insulin nokukhetha indawo yomjovo, kufanele wazi ukuthi ukuphumelela kokwelashwa kanye nesivinini esenzeka into ethile kuncike, okokuqala, ku:
izimo zokushisa zemvelo.
Ekushiseni, isenzo se-insulin siyashesha, futhi emakhazeni sihamba kancane.
Ukugcotshwa okulula kwendawo yomjovo kuzothuthukisa ukumuncwa kwe-insulin futhi kuvikele ukumiswa. Uma imijovo emibili noma eminingi yenziwa endaweni efanayo, khona-ke amazinga eglucose wegazi angawa kakhulu.
Ngaphambi kwemijovo, udokotela uhlola uzwela womuntu ngamunye ogulayo kuma-insulin ahlukahlukene ukuze avikele imiphumela emibi engalindelekile ngesikhathi sokwelashwa kwe-insulin.
Izindawo zokujova ezingabandakanywa kangcono
Kubalulekile ukusondela ngokuthobekile izincomo zikadokotela oholayo futhi wenze imijovo ezindaweni zomzimba ezivunyelwe kuzo. Uma isiguli senza umjovo ngokwaso, kufanele ukhethe umphambili wethanga ngokusebenza isikhathi eside kwe-insulin. Ama-insulin amafushane nama-ultrashort afakwa kwi-peritoneum.
Ukujova i-insulin ezinkalweni noma ehlombe kungaba nzima. Ezimweni eziningi, umuntu akakwazi ukwenza isibaya sezikhumba kulezi zindawo ngendlela yokuthi singene kungqimba lwamafutha angaphansi.
Ngenxa yalokhu, umuthi ufakwa ezicutshini zemisipha, ongasenzi nhlobo isimo somuntu onesifo sikashukela. Ukususa izindawo ezingafanele zenqubo, kufanele uqiniseke ukuthi akukho mijovo endaweni ehleliwe:
Izimpawu zokulimala kwemishini esikhunjeni,
Lokhu kusho ukuthi nsuku zonke umuntu udinga ukuthatha imijovo eminingi ye-insulin ukuze azizwe anelisekile. Kulokhu, indawo yokuphathwa kwe-insulin kufanele iguquke njalo, ngokuya ngenqubo yokuphathwa kwezidakamizwa.
Ukulandelana kwezenzo kufaka izinketho eziningana zokuthuthukisa imicimbi. Ungaqhuba umjovo eduze kwendawo eyedlule, ihlehlela emuva ngamasentimitha amabili.
Kuvunyelwe futhi ukuhlukanisa indawo yokufaka izingxenye ezine. Enye yazo isetshenziselwa isonto, bese imijovo iqala kolandelayo. Ngakho-ke, isikhumba sizokwazi ukululama futhi siphumule.
Isazi sevidiyo esikulesi sihloko sizokutshela kabanzi ngenqubo yokuphathwa kwe-insulin.
I-Insulin Injection: Ukuphathwa Kwezidakamizwa
I-insulin kumthamo okhethwe udokotela kufanele uphathwe ngokungaziphathi kahle, ekuqineni kongqimba lwezicubu ze-adipose. Umuthi uphathwa ngenaliti encane noma ngedivayisi ebukeka njengepeni. Kutholwe izindawo ezahlukene ezahlukahlukene lapho kungatholakala khona i-insulin. Isisu yindawo ethandwa kakhulu yemijovo ye-insulin, abantu abaningi abanesifo sikashukela abathanda ukuyisebenzisa. Ukuze wenze umjovo kule ndawo, kubalulekile ukugoqa izicubu zohlangothi zombili kugebe eliphakathi okhalweni nasesifubeni. Kufanele kube ngu-4-6 cm ukusuka maphakathi nenkaba. Le ndawo ilungele imijovo ezimele ye-insulin, futhi umjovo ubangela ukungaphatheki kahle okuthe xaxa kwezinye izindawo.
Iziphi ezinye izindawo ezitholakala ngomjovo we-insulin?
Ingalo ephezulu ingenye indawo lapho ungafaka khona i-insulin. Inaliti kufanele ibekwe emuva engalweni (esifundeni se-triceps), indawo efanele kunazo zonke phakathi nendawo ye-elbow nekhanda lokuthambisa. Ububi obukhulu bendawo ehlombe iqiniso ukuthi kunzima kakhulu ukusebenzisa nokuzilawula ngomuthi. Mhlawumbe kuzokhululeka ngokwengeziwe ukujova i-insulin ehlombe elingalawulwa: ngakwesobunxele sesiguli esingakwesokunxele noma ngakwesokunene somuntu wesokunxele.
Ithanga libuye liyindawo engabizi kakhulu yokuzijova. Kufakwa inaliti ngaphambili kwethanga, enkabeni yesifunda phakathi kwedolo nendawo ye-inguinal. Kwenziwa umjovo we-insulin, kuguquka kancane ukusuka enkabeni kuya ngaphandle komlenze. Kubalulekile ukufaka umuthi esibayeni samafutha okungenani ama-4-5 cm.Naphezu kokutholakala kwendawo yomjovo, ukujova okungapheli kule ndawo kungadala ukungakhululeki ngenkathi uhamba noma ugijima.
Enye indawo lapho kungeniswa khona i-insulin kungaba yindawo yokushintshela emuva kubokhi. Ukujova i-insulin, udinga ukudweba umugqa wokucabanga udabula esiqongweni sezinkophe. Inaliti kufanele ibekwe ngaphezu kwalayini, kodwa ngaphansi okhalweni, cishe kube maphakathi phakathi komgogodla nezinhlangothi. Njengasesimweni sehlombe, imijovo kule ndawo inzima impela ukuzijayeza ngokuzibusa ngezidakamizwa.
Ukufakwa kwe-insulin, ukulungiswa koshukela egazini
Izinga lokufakwa kanye nokusebenza kwe-insulin kuzohluka ngokuya lapho kwethulwa khona. Izidakamizwa zithakwa ngokuhlukile kumasayithi ahlukahlukene. Lolu lwazi lungasetshenziswa lapho uhlela imijovo yezinhlobo ezahlukahlukene ze-insulin.
Lapho kufakwe esiswini, i-insulin ingena ngamandla egazini, okuvumela ukuba usenze ngokwejwayelekile ushukela wegazi. Endaweni yamahlombe, isilinganiso sokumunca asisheki njengasesiswini. Ukwethulwa kwezidakamizwa emaqhugwaneni noma okhalweni kubonakaliswa isilinganiso sokuncipha okuhamba kancane.
Kungcono ukufaka i-insulin esebenza ngokushesha obondeni lwesisu ngokushesha ngemuva kokudla. Umuthi isenzo eside futhi esiphakathi singafakwa kwezinye izindawo. Ngenxa yokumuncipha kancane, baligcina kangcono izinga elizoshukela legazi. I-insulin esetshenziswa ngama-insulin isebenza ngempumelelo inqobo nje uma isunguliwe, ngenxa yesilinganiso sayo esincane sokufaka. Ukuzivocavoca umzimba kungakhuphula izinga lokufakwa kwe-insulin futhi kunciphise ushukela wegazi ngokushesha, la maqiniso adinga ukucatshangelwa lapho kuhlelwa imijovo.
Ukulawulwa kwesifo sikashukela: Izici ze-Insulin
Kubalulekile ukuqonda ukuthi isifo sikashukela sidinga ukuphathwa njalo kwe-insulin, futhi noma yimuphi umjovo ukulimala kwezicubu, yize kunjalo. Imijovo ezindaweni ezifananayo kufanele igwenywe kaninginingi. Lokhu kungacasula isikhumba nezicubu ze-adipose ezingaphansi. Ukufakwa imijovo esiswini kuphela kungadala ukungaphatheki kahle, ngaphezu kwalokho, kwakheka izinkinga ezithile zesifo sikashukela. Udokotela uvame ukululeka ngokushintsha indawo yomjovo.
Ukuphathwa okulandelanayo kwezidakamizwa endaweni eyodwa kungaholela ekwakhekeni kwama-dimples esikhunjeni (i-lipoatrophy zone) noma ama-seals (lipodystrophy). Lokhu kungakhululeka futhi kuphinde kuthinte ukumunca nomuthi. Umjovo ngesikhathi ngasinye sosuku kufanele wenziwe endaweni efanayo. Kodwa-ke, kubalulekile ukuya ezinhlangothini ukuze uqiniseke ukuthi umjovo awuhlali njalo endaweni efanayo. Isibonelo, umthamo wobusuku we-insulin esebenza isikhathi eside uhlala ufakwa ethangeni. Kodwa-ke, ubusuku ngabunye kukhona ushintsho emathangeni angakwesokudla nangakwesobunxele. Uma umuntu onesifo sikashukela ehlala ejova umthamo we-insulin osebenza ngokushesha esiswini sakhe, kufanele ashintshe uhlangothi lwesobunxele nolwangakwesokudla.
Ukuphathwa kwe-insulin nokudla okunempilo, ukulawulwa kweglue glucose
Ekwelashweni kwesifo sikashukela, inhlanganisela yokwelapha i-insulin nokondleka kubalulekile. Ngokwemvelo, ukusetshenziswa kwe-insulin kuphela ukwenza amazinga eglucose abe muncu akwanele, umuntu onesifo sikashukela udinga ukondliwa okufanele ngaso sonke isikhathi ngokubalwa kwenani lama-carbohydrate adliwayo anikezwe ngokudla. Imvamisa, uma kuyisifo sikashukela sohlobo olu-1 ngesimo esinamandla impela, kusetshenziswa izidakamizwa ezisebenza isikhathi eside eziphathwa ngaphandle kokudla ekuseni nakusihlwa. Ngaphezu kwalokho, kusetshenziswa i-insulin esebenza ngokufushane - inikezwa ngokushesha ngaphambi kokudla.
Uma sikhuluma ngohlobo lwesibili, kungukudla okufanele okuthi ukwelashwa kube ngaphansi kwayo, nezidakamizwa, ikakhulukazi uma zingama-insulin injections, azikhonjiswa kuzo zonke iziguli. Ngaphezu kwalokho, abantu abanesifo sikashukela kufanele bahlole njalo amazinga kashukela wegazi labo, udokotela uzokweluleka imvamisa yezinkomba zokuqapha. Kubalulekile ukuqapha ushukela wakho wegazi ngokufaka kudayari yabo noma kwincwadi yokubhala, ukuze ubonise ukuguquguquka kwamanani kudokotela. Uma ukudla kungashintshanga ngokumelene nesizinda sedosi elikhethiwe le-insulin, kepha izinkomba zihlala ziphakeme, umthamo uyalungiswa, zonke izinto ezingathinta ukwanda kwe-glucose ziyahlaziywa. Njengoba umuntu onesifo sikashukela ethola “isipiliyoni” sesi sifo, ufunda ukuzikhethela yena ngokwakhe, kuye ngezimo nangoshintsho kushukela wegazi.
Izinhlobo ezahlukahlukene zomuthi
Kunezinhlobo ezimbili zalesi sifo - isifo sikashukela sohlobo lokuqala, okubandakanya ukuphathwa kwe-insulin nesifo sezinhlobo ezi-2, ukunciphisa izimpawu, izidakamizwa ezinciphisa ushukela kufanele zithathwe.
Vele, udokotela omuhle impela uzokhetha indlela engcono kakhulu yokwelashwa kwalesi sifo esivele sisho. Ngaphandle kweqiniso lokuthi uzokhetha umthamo ngamunye wezidakamizwa ezingenhla, uzokutshela futhi impela lezo zidakamizwa ezisebenzisa isilinganiso esihle kunazo zonke.
Amakhambi amahle kakhulu yizidakamizwa ezisebenza isikhathi eside ezidumile ezigulini nasezindala. Impela, kuleli cala, kwanele ukujova amahlandla amaningi noma ukuthatha amaphilisi, bese kuthi ukugxuma ushukela wegazi kunyamalale.
Kepha futhi ngaphezu kokudla ngesikhathi esifanele izidakamizwa ezisezingeni, kubaluleke kakhulu ukuthi udle ngokulungile. Imikhiqizo kuphela enconywe uchwepheshe okufanele isetshenziselwe ukupheka. Isibonelo, cishe bonke ochwepheshe bezokwelapha basho ngamabomu ukuthi abantu abanesifo sikashukela abaphakanyisiwe ukuthi badle ukudla okuthosiwe, kanye namafutha ngokweqile futhi, futhi, okuqukethe ushukela omningi kakhulu.
Kunezinhlobo ezahlukene ze-insulin - i-ultrashort, isikhathi esifushane, esiphakathi nendawo kanye nesenzo eside.
I-insulin efingqiwe emfushane iyathathwa ngaphambi nje kokudla ukuze kugwenywe ukugxuma okubukhali kwe-insulin ngemuva kokudla. Uhlobo olunwetshiwe lwe-insulin lusetshenziswa ngqo phakathi nosuku, futhi ngesikhathi sokulala nasesiswini esingenalutho.
Ngokuya ngesilinganiso semithi ebekwe udokotela, isiguli singakwazi ukulawula irejimeni yaso yansuku zonke futhi sihlele ngokufanele. Uma isingeniso sanele kuphela phakathi nosuku, khona-ke ungafaki idivaysi elenza kube lula kakhulu ukufaka uketshezi.
Uma kudingekile ukuphatha umuthi amahlandla amaningi ngosuku ukwelashwa, khona-ke usuku kuhlelwa ngalo ukuze kungenzeka ukuphatha i-hormone ngesikhathi esikhonjisiwe, kungcono ukusebenzisa ipeni lesirinji.
Inqubo ihlelwe kusengaphambili ukuze wazi kahle ukuthi futhi kanjani futhi kuphi futhi le nqubo. Ngaphezu kwalokho, ukusiza abanesifo sikashukela kukhona uhlu lwezinhlobo zakamuva ze-insulin, kanye namadivayisi wokwethulwa emzimbeni wesiguli.
Izazi eziningi ze-endocrinologists zincoma ukuthi iziguli zazo zilungiselele kusengaphambili, futhi zisho kanjalo, zisho, ukuthayipha inani elilinganayo loketshezi esibayeni sokufaka bese zibeka lo mshini ngaphansi kwezimo ezingasebenzi. Iziguli eziningi zilalela izeluleko futhi zidayele kuqala idosi elifunekayo le-hormone elisetshenzisweni yazo futhi, uma kunesidingo, ziyifaka emzimbeni wesiguli.
Amadivayisi asetshenzisiwe alahlwa ngokushesha, ukusetshenziswa kwawo okuphindaphindiwe akwamukeleki.
Okuhlukile kuyipeni lesirinji, kuguqula inaliti kuphela.
Isifo sikashukela sivame ukwehlukaniswa izinhlobo ezimbili. Abantu abanohlobo lwesifo sokuqala (oludinga i-insulin) kufanele basebenzise i-insulin ngokushesha noma ngaphambi kokudla.
Imvamisa kufanele ufake i-insulin ezindaweni zomphakathi. Vele, lesi simo siwuthinta kabi i-psyche yomuntu ogulayo, ikakhulukazi ingane. Abantu abanesifo sikashukela badinga ukujova umuthi osebenza isikhathi eside ekuseni nasebusuku.
Le ndlela ama-pancreas angalingiswa ngayo.Ukuthi imijovo yesifo sikashukela ingenziwa kuphi nokuthi kuphi.
I-insulin ihlukaniswe yisikhathi sokusebenza:
osethatha isikhathi eside. Isetjenziswa kumarejimendi yokwelashwa ejwayelekile ngaphambi kokulala noma ngemuva kokuvuka,
isenzo esisheshayo. Kusetshenziswa ngaphambi noma ngemuva kokudla ukugwema ukubamba ushukela egazini.
Ku-mellitus yesifo sikashukela sohlobo lwesibili, kuyafakwa imijovo ye-insulin noma amaphilisi, okwandisa umuzwa we-insulin, okhiqizwa yi-pancreas. Lolu hlobo lokugula luyingozi, kepha uma ulashwa ngendlela efanele, ungahola impilo esebenzayo.
Uma ulandela ukudla okuqinile nokuzivocavoca, ungenza ngaphandle kwezidakamizwa isikhashana, ngoba ushukela wegazi ngeke uvuke.
Kodwa-ke, isilinganiso saso kumele silinganiswe njalo ekhaya kusetshenziswa i-glucometer.
Abanesifo sikashukela badinga ukubhekana nomuthi omfishane nohlala isikhathi eside. Uhlobo lokuqala luvame ukukhehlwa ngaphambi kokudla, nolwesibili - kabili ngosuku.
Inhloso yokuqala ukwehlisa ushukela oza nokudla ngenhloso yokugwema ukugxuma okubukhali egazini. Uhlobo olunwetshiwe lwenzelwe ukugcina amazinga kashukela azinzile usuku lonke.
Ukukhethwa kwe-hormone, kanye nokusungulwa kwemithamo kwenziwa ngokugadwa ngaphansi kokuhlolwa kukadokotela. Isiguli senza isilinganiso soshukela wegazi kuye izikhathi ezi-10 ngosuku.
Ukuze wenze lokhu, udinga ukuba nemitha elungile kunayo yonke - i-glucometer. Zonke izinkomba ezitholakele ziyaqoshwa, futhi lapho esezihlolile, udokotela ukhetha uhlobo lomuthi futhi ubeka nomthamo wawo ngemiphumela eqinile kunazo zonke.
Iphuzu elibalulekile yindlela efanele yochwepheshe ekukhetheni umthamo nohlobo lwe-insulin. Udinga ukubheka izinkomba zansuku zonke zoshukela, ukondleka kanye nokusebenza ngokomzimba kwesiguli, ngoba zonke lezi zinto zithinta umphumela womjovo we-insulin: isilinganiso sokufakwa kanye nokweqiwa kweglucose.
Izimpawu zesifo sikashukela kanye nokwelashwa kwaso
Ngaphambi kokuthi sikhulume ngendlela efanele yokusebenzisa i-insulin, ake sikhulume ngesifo sikashukela. Kumuntu ophile kahle, ushukela wegazi kufanele abe kuhla kusuka ku-3.5 kuya ku-6.0 mmol / L. Ushukela ophakanyiswe njalo uphawu lokuqala lwesifo sikashukela. Isimo esichaziwe siyiqiniso ngesifo sikashukela sohlobo 1.
Ngifisa ukuqaphela ngokushesha ukuthi asikho ngaso sonke isikhathi isidingo sokujova i-analog yehomoni yomuntu ngendlela yomjovo. Kwezinye izimo, kwanele ukuthi isiguli siphuze imishanguzo ekhethekile esiza ukusiza ukwehlisa amazinga kashukela egazini lapho kukhulunywa ngokugula 2.
Ungangehlisa ushukela ngosizo lwamathebulethi. Ngaphezu kwalokho, kugcinwa ezingeni elijwayelekile ngokuvuselela umzimba ukuze ukhiqize ngokuzimela i-hormone esanda kuvezwa.
I-pancreas ifaka i-insulini ngamanani anele, futhi umuthi usiza umzimba ukudonsa kahle ushukela. Ngenxa yalokhu, ushukela udla amaseli bese egcobisa umzimba ngamandla futhi, ngenxa yalokho, akahlali egazini.
Imbangela enkulu yesifo sikashukela sohlobo 2 ukuntuleka kokuzwela kwe-insulin, noma ngabe i-pancreas iyiveza ngamanani anele. Kuyacaca ukuthi kuleli cala asikho isidingo sokufaka i-insulin ngemijovo, kwanele ukuthatha izidakamizwa ezonciphisa ushukela njalo.
Kuyacaca ukuthi udokotela kuphela ongakunquma lokhu noma lowo muthi. Ukuze enze lokhu, kudingeka ahlole ngokuphelele onesifo sikashukela.
Indlela, kungakhathalekile ukuthi imuphi umuntu onesifo sikashukela esitholakele, ukuthi kungumbuzo wokuthi angajova kanjani i-insulin kahle noma ukuthi udinga imijovo ye-insulin yini ngesikhathi sikashukela, kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukubonana nodokotela wakho we-endocrinologist.
Awukwazi ukwenza izinqumo ezinemininingwane ngokwakho. Udokotela akahlali enikeza imijovo yesifo sikashukela, kwesinye isikhathi ayidingeki, ikakhulukazi maqondana nokugula uhlobo 2.
Kuliqiniso, isinqumo sokuthi umuthi ongakanani ongawunika udokotela onesifo sikashukela esithile unqunywa ngudokotela wakhe obonayo. Uma umuntu onesifo sikashukela engazizwa eyindlala enkulu, izinkomba zikashukela zisezingeni elingaphezulu kokwemukeleka, khona-ke i-insulin encane ingabanjiswa.
Isibonelo, kwanele ukwenza lokhu kanye ngosuku, ekudleni, noma kunalokho, ngemuva nje kokuba kuthathiwe. Yebo, uma isiguli singazizwa kahle, sikhuphuka njalo ngamazinga kashukela, futhi i-hormone ayikhiqizwa ngokuzimela, kuyofanele uyifaka kaningi kakhulu.
Kulokhu, ukwehlisa ushukela kuyadingeka ngokungenisa i-hormone, hhayi kuphela ngemuva kokudla, kodwa futhi nesisu esingenalutho.
Vele, ukunquma zonke lezi zici zomzimba, kudingeka izivivinyo ezikhethekile, ezinikela ngqo ezindongeni zesikhungo sezokwelapha. Kuzofanela futhi uhlaziye izinguquko ezinjalo emzimbeni isonto lonke, okungukuthi, kaningana ngosuku ukukala inkomba yeglucose usebenzisa ithuluzi elifana ne-glucometer. Kulokhu, ukudla okufanelekile kuyadingeka.
Udinga ukulandela ukudla okune-carb ephansi, ungadli ukudla okuthosiwe kanye nokudla okuqukethe amanani amakhulu eglucose.
Kufanele ukuyeke ngokuphelele ukusetshenziswa kotshwala neminye imikhuba emibi. Hhayi-ke, masingakhohlwa ukuthi iziguli ezisola ngokwazo ukuthuthukiswa kwalesi sifo kufanele ziphinde zicabange ngohlobo lwazo lwansuku zonke.
Ukuzivocavoca kuncishiswa ngangokunokwenzeka, kuyilapho futhi kungenakwenzeka ukuba ushintshe ngokuphelele indlela yokuphila engenzi lutho. Ukuhamba njalo emoyeni omusha kuzoba wusizo kakhulu, kepha kungcono ukwenqaba ukuzivocavoca ngokweqile.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukujova okufika ngesikhathi kwe-insulin kuzosiza ukugcina amazinga omzimba esezingeni elifanele.
Yize kunjalo, kunezimo lapho lesi sifo siholela emiphumeleni emibi, uma yonke le mithetho inganakwa.
Ipeni lesirinji yithuluzi lesimanje, okuyi-cartridge encane enomuthi ngaphakathi. Ukudonswa kuphela kwamapeni wesirinji ukuthi isilinganiselo sawo sinobukhulu beyunithi elilodwa.
Ukuphathwa ngqo komthamo ofinyelela kumayunithi angama-0,5 ngepeni yesirinji, ngandlela thile, kunzima. Kufanele unake njalo i-cartridge, ngoba kuhlale kunobungozi bokuthola i-insulin ephelelwe yisikhathi.
Okokuqala udinga ukugcwalisa ipeni lesirinji bese uthambisa amaconsi ambalwa ento ephuma kunaliti ukuze uqiniseke ukuthi azikho izingulube zomoya, futhi ukuhamba kwe-insulin kuzokhululeka. Lapho idivaysi isilungele ukusetshenziswa, setha isibekiseli enanini olifunayo.
Lapho ipeni lesirinji ligcwele futhi isikali sibonisa umthamo owuthandayo, ungaqhubeka nomjovo. Kubalulekile ukulandela izincomo zikadokotela maqondana nokuqoqwa kwamaqhubu esikhumba kanye ne-angle lapho kufakwa khona inaliti.
I-insulin ifakiwe, kuthi uma umuntu esecindezele inkinobho ngokuphelele, udinga ukubala ukuya ku-10, bese ekhipha inaliti. Uma inani elikhulu le-insulin lifakiwe, udokotela angeluleka ngokuthatha isikhathi eside ukuqiniseka ukuthi umjovo uqedile.
Kubalwa kuze kufike ku-10 noma ngaphezulu kuqinisekisa ukuthi idosi eliphelele liyabanjiswa. Kuyasiza nokuvikela into ukuthi iphunyuke endaweni yomjovo ngemuva kokuba kukhishwe inalithi. Ipeni lesirinji yithuluzi ngalinye, kwenqatshelwe ukulisebenzisa abanye abantu.
Ungashiyi inaliti emshinini. I-insulin, kulokhu, ayivukuzi ngenalithi ephuma kwizixhobo. Lapho kukhishwa inaliti, umoya nezinto ezinobungozi azikwazi ukungena esibayeni sesirinji. Izinaliti kufanele zilahlwe njalo ngokufanele ngokufaka isitsha sazo esikhethekile sezinto ezibukhali.
Izindawo zomzimba ezilungele kakhulu imijovo ye-insulin zifaka:
Futhi, imijovo ingenziwa ezingalweni ezingaphezulu, uma kunesilinganiso esanele sezicubu ze-adipose.
Odokotela balule ukuba kuguqulwe indawo yomjovo isikhathi ngasinye. Kubalulekile ukuthuthukisa uhlelo lwakho umuntu azoshintsha ngalo izindawo zokujova njalo. Umjovo ngamunye omusha kufanele wenziwe endaweni entsha yomzimba.
Imvamisa iziguli ziyazibuza ukuthi kungani i-insulin ifakwe esiswini .. Impendulo ilula impela - kule ngxenye yomzimba inani lesicubu se-adipose.
Ungasebenzisa umdwebo noma umdwebo womzimba ukukhomba izindawo lapho sekwenziwe khona umjovo nokuthi uzokwenzelwa kuphi ngemuva kwesikhathi. Udokotela oholayo uzokusiza ukuthi wenze isheduli yokushintsha izindawo zesikhumba imijovo.
Ividiyo izokutshela ngokuningiliziwe ukuthi ungayijova kanjani i-insulin ngepeni. Ungenza umjovo esiswini, amasentimitha angama-5-6 ukusuka enkabeni hhayi eduze kakhulu eceleni. Ngemuva kwalokho udinga ukuzibheka esibukweni bese uqala kusukela engxenyeni ephezulu kwesobunxele yendawo yomjovo, udlulela engxenyeni ephezulu yangakwesokudla, bese usiya ngakwesobunxele ngakwesokunxele nangaphansi kwesokunxele.
Lapho ujova amachaphaza, kufanele uqale ufake injekishini engakwesokunxele eceleni, bese uyifaka enkabeni. Okulandelayo, udinga ukwenza umjovo enkabeni yenxele, bese udlulela kwesokudla.
Uma udokotela ethi umuntu anganikeza imijovo engalweni, udinga ukuhambisa indawo yomjovo kusuka phansi kuya phezulu noma okuphambene nalokho. Kufanele uthathe inalithi yobubanzi obuncane nobude. Imijovo yenaliti emfushane iyahlukahluka futhi ilungele iziguli eziningi.
Isikhumba singaphakanyiswa kuphela ngesithonjana nesikhanda sangaphambili. Uma ubamba indawo yesikhumba nenombolo enkulu yeminwe, ungadonsa izicubu zomsipha, ezizokhulisa ubungozi bomjovo emsipha.
Njengamanje, i-hormone iphathwa kusetshenziswa amapeni wesirinji noma amasirinji alahlwayo. Ama-syringe athandwa ngabantu asebekhulile; kubantu abasha, ipeni lesirinji libhekwa njengento ekhangayo kakhulu, okulungele ukuyisebenzisa - kulula ukuyihambisa, kulula ukudayela umthamo odingekayo.
Kepha amapeni wesirinji abiza kakhulu uma kuqhathaniswa nesirinji enokutholakala, ongathengwa ekhemisi ngentengo engabizi.
Ngaphambi komjovo, ipeni lesirinji kufanele lihlolwe ukuthi lisebenza yini. Kungahle kwephule, kungenzeka futhi ukuthi umthamo uzothola amaphuzu angalunganga noma inalithi izoba nephutha.
Awusoze nje wasonga ngokugcwele inaliti kwisibambo futhi i-insulin ngeke igeleze ngenalithi. Phakathi kwezintambo zepulasitiki, kufanele ukhethe lezo ezinenalithi eyakhelwe ngaphakathi.
Kuzo, njengomthetho, i-insulin ayihlali ngemuva kokuphathwa, okungukuthi, umthamo we-hormone uzophathwa ngokuphelele. Kumasirinji anenaliti ezikhiphekayo, inani elithile lemithi lihlala ngemuva komjovo.
Kufanele unake ukuthi mangaki amayunithi e-insulin amele isigaba esisodwa sesilinganiso. Ama-syncinge we-insulin ayatholakala. Ngokuyisisekelo, umthamo wabo ngu-1 ml, ohambelana neyunithi yezokwelapha eyi-100 (IU). Isirinji inezigaba ezingama-20, ngasinye sazo sihambelana amayunithi ama-2 we-insulin. Kumapeni wesirinji, ukuhlukaniswa okukodwa kwesilinganiso kufana ne-1 IU.
Ungayisebenzisa kanjani i-insulin? Abanye abanesifo sikashukela basebenzisa amasirinji alahlwayo omjovo. La ma-syringe anesiqukathi somuthi wepulasitiki esihlukaniswe izingxenye eziyi-10 ukubala inani lemithi yokujova nenaliti emincane.
Ukuphazamiseka kokusetshenziswa kwabo ukuthi iqoqo le-insulin lifinyelela ezingeni le-1 kusho amayunithi ama-2 e-hormone. Ungayisebenzisa kanjani, isirinji ayilungile? Inika iphutha lesigamu sokuhlukaniswa.
Ezinganeni ezigulayo, lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba ngokwethulwa kwevolumu yiyunithi eyengeziwe, ushukela wazo uzokwehla ngokujwayelekile.
Ukuze kube lula ukuzijova, kuye kwasungulwa amaphampu e-insulin. Le yidivaysi ezenzakalelayo engalungiswa ukuphatha inani elithile lezinto lapho zifakiwe. Kulula ukujova i-insulin. Kodwa izindleko zamadivayisi anjalo azivumelekile - kuze kufike kuma-ruble ayizinkulungwane ezingama-200. Akuzona zonke iziguli ezingakwazi ukukhokhela izindleko ezinjalo.
Inketho eyamukelekayo kakhulu ngama-insulin ama-sindulin nezinaliti ezincane noma isirinji. Zithola iyunithi eli-1 lomthamo wama-hormone kumuntu omdala noma amayunithi angama-0.5 enganeni. Isethi yezinaliti inamathiselwe kwisibambo, ngasinye saso singasetshenziswa isikhathi se-1. Idivayisi esetshenziselwa imijovo ithinta ukunemba komthamo.
Ukubala ukuthi ingakanani i-insulin edingekayo kumjovo ngamunye akunzima. Kepha lokhu kuyalulekwa kuphela kulabo abalandela ukudla. Ngaphandle kwalokho, gxuma ushukela luzobhekwa kungakhathalekile ukuthi kunjani.
Ukubalwa kucabanga ukuthi isiguli senza umjovo ngaphambi nangemva kokulala, ngaleyo ndlela sigcina izinga lansuku zonke, okusho ukuthi likhuphuka kuphela ngemuva kokudla. Ukuhlushwa ushukela wegazi kufanele kukalwe kaningana ngosuku, futhi imitha kufanele ibe olunembile ngokuphelele.
Uma isiguli sinamathela ekudleni okunqunyelwe, khona-ke ngemuva kokudla, odokotela batusa injekishini ye-insulin emfushane. Kukhona ne-ultrashort, kepha ilungele kuphela ukubuyiselwa kwemali okusheshayo okuvela kungazelelwe ushukela futhi ukufakwa kokudla okujwayelekile ngeke kusize ngalutho.